Waddamada EU oo qabta alaabo kobi ah oo qiimahooda yahay bilaayiin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waddamada EU oo qabta alaabo kobi ah oo qiimahooda yahay bilaayiin
Boqolki 60 bostada ka qabanaa alaabahan
La daabacay tisdag 6 augusti 2013 kl 10.15
Sannadkii hore waddamada katirsan ururweynaha EU waxey joojiyeen alaabo koobi ah oo qiimahooda u dhigmo ku dhawaad hal bilyan oo lacagta eurogo taas oo lacag Iswedhish noqoneysa sagaal bilyan oo karoon. Kastamka Iswedhen alaabaha kobigaa ee uu qabatey waxay kalobar ahaayeen sakiinada lagu xiirto.
- Mida loo aaneyn karo waxa weeye in sakiimada yahiin wax ay sahlantahay in la koobiyeeyo waana raqiis in la daadgureeyo oo gaar ahaan lagu qaado boostada, waana halka ugu badan ee aan ku qabano. Sakiimada originalka ah ayaga waa qaali marka faa’ido ayaa ku jirta in koobi laga sameeyo ayuu yeri Per Holgersson oo ah xeel-dheere dhanka alaabaha oo katirsan hayadda kastamka Iswedhen Tullverket.
Sida ay sheegeyso warbaxin ka soo baxdey guddiga midowga Yurub waxaa hoos u dhacey qabashada ay sameeyaan kastamyada EU. Laakiin alaabaha ay qabtaan ee koobiga ah ayaa ah kuwo qiimahooda ay kordheen. Boqolkii 60 alaabaha koobiga ah ee la qabto ayaa ah kuwo laga qabto qulqulka boostada, balse jamaca alaabaha koobiga ah ee la qabto ayaa ah alaabaha bada la soo marsiiyo. Kastamaka Iswedhen wey yartey alaabaha noocaas ah ee ay qabtaan, waxeyse ku badanyahiin waddamada kale ee EU, gaar ahaan magaalooyinka leh dekadaha waawey sida Rotterdam iyo Hamburg.
Kastamka Iswedhen sannadkii hore waxuu qabtey alaabo qiimahooda suuqyada ka gaarayo 17 malyan oo karoon. Kasakow sakiinta waxyaabaha kale oo la qabto ayaa ah dharka kabaha, alaabaha laysku qurxiyo weliba alaabo koobi ah oo mobiilada loo Isticmaalo.
Guud ahaan alaabaha koobiga ah EU waxey ka soo garaan Ashiya. Dalka Turkiga oo ah dal geografi ahaan u dhow qaar kamid ah waddamada EU ayaa noqdey dalka laga soo diro alaabaha koobiga ah ee suuqyada EU ku socda , inkastoo ay Iswedhen inta soo gaarta alaabahas yaryahiin. Laakiin weli Shiina ayaa ah dalka kaalinta koobaad ku jra ee laga soo diro alaabaha koobiga ah ee soo gaara Iswedhen.
- Weli inta badan alaabaha waxey ka yimaadan shiina , boqolkii 75-80 sannadyada qaarna waabo ka badantahay. Guud ahaan EU alaabaha koobiga ah ee shiina ka yimaada waa boqolkii 60-65. Ayuu yeri Per Holgersson.
Xigashada: ekot/Simon Andrén